Ukuhlaziywa kwe-Semalt: I-Web Data Scraping Tools ezokukunceda ngokwenene
Siyazi ukuba ukuhlulwa kwewebhu kuyinkimbinkimbi ubuchule obubandakanya ukujoliswa kunye nokukhipha ulwazi kwiiwebhusayithi ezahlukeneyo. Uninzi lwamashishini luxhomekeke kwidatha, kwaye ithuluzi elincinci le-web scraping lingasombulula iingxaki ezahlukahlukeneyo zedatha ezinokusinika unomxholo onamandla kunye noluncedo.
Iinzuzo ezibonakalayo zeethuluzi zokucoca i-web zilula ukuyisebenzisa kwaye zinokukhupha idatha echanileyo ngaphakathi kwemizuzwana embalwa. Ezinye zezikhetho zikhululekile, ngelixa ezinye zihlawulwa. I-web scraping tools ithetha ukuhlukahluka komnye ngokusekelwe kwiimpawu, iinketho kunye nokuphatheka kwazo. Abanye babo bafuna iikhowudi ngelixa abanye bengakufuni ukuba ube nezakhono zeprogram.
Ukuba ukhangele ukukhangela inani elikhulu leedatha okanye uhlele ezinye iiprojekti zokukhahlela i-web, i-Abenti iya kwenza imisebenzi eninzi kuwe. Ukusebenzisa le sixhobo, unokwenza imisebenzi ehlukileyo yokukrazula kanyekanye kwaye uchithe inani elikhulu leedatha. Isinika idatha edityanisiweyo kwiifayile ze-JSON, TSV kunye ne-CSV kwaye isebenzisa ii-API ukuzenzelela ngokuqokelela idatha ekuqoqweni kolwimi olukhethiweyo. Ingqungquthela yaso yamahhala inenani elincinci lokukhetha, ngoko unako ukufumana inguqulo ehlawulwayo ezayo ngesiqinisekiso sokubuyisela imali.
I-CloudScrape ingeyona enye ithuluzi lokucoca idatha lewebhu elixhasa iqoqo elikhulu lwedata kwaye ayifuni ukukhuphela. Uhlelo lokusebenza olusekelwe kwisiphequluli luyakwazi ukusekela kalula abaququzeleli balo kwaye lucacise idatha yesikhathi sangempela kuwe. Kamva, ungagcina idatha ekhishiwe kwi-Google Drayivu kunye neBhokisi. umnatha okanye ukuthumela ngaphandle njenge-CSV ne-JSON.
I-Datahut yindlela yokukhutshwa kwedatha yebhanki ekhutshwe kakhulu, eguquguqukayo, kunye ne-enterprise.Unokufumana ulwazi oluchanekileyo kwixabiso elifanelekileyo kunye nesiqinisekiso sokubuyisela imali esingu-100%. Kufuneka ukhumbule ukuba akukho nto yokukhulula ye-Datahut, kodwa i-premium version yayo ibonisa uhlahlo lwabiwo-mali kwaye ilungele ukuqaliswa kweenkampani kunye neenkampani ezisungulwe. Iqokelela idatha kwiindawo ezininzi kwaye iqokelela imveliso, umxholo, imifanekiso kunye neeprofayili zakho.
5. KwiWebhu. Io
IWebhu. Io iyisicelo sewebhu esinikezela ngokukhawuleza kunye nokulula kufumaneka kwiinkcukacha ezichanekileyo kwaye isebenzisa ubuchwepheshe bekhwekhnoloji ekwenzeni iindidi zemisebenzi. Iyakwazi ukutsalathisa indawo yakho kwaye ikhuphe idatha ukusuka kumaphepha ewebhu ahlukeneyo kwiilwimi ezingama-200. Ixhasa i-RSS, JSON, HTML ne-XML ifayile.
Enye yezona zixhobo eziphambili zokucoca idatha yiFivetran. Ingumtsalane onamandla kwaye onokwethenjelwa wedatha kwaye usindisa amandla kunye nexesha lakho. Ngexesha elithile, i-Fivetran inokukhipha kwiiwebhu ezili-100 ukuya ku-100000 ngaphandle kokuphuma Source .